एक पिताले आफ्नी छोरी’लाई भनेको कुरा, जुन पढ्दा आँसु आउन सक्छ ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नु’होला] – Sapana Sanjal
June 18, 2021 290
Sapana Sanjal : बुवाले छोरीलाई उसको आइफोन उपहार दिनुभयो । भोलीपल्ट छोरीलाई सोध्नुभयो, प्यारी छोरी ! आइफोन पाएपछि तिमीले सबैभन्दा पहिला के गर्यौ ?
Prevअदालतको आदेश लगत्तै सरकारले तोक्यो कर तिर्ने मिति, कहिले सम्म तिरिसक्नुपर्छ ? सूचना सहित
Nextगंगा नदीमा तैरिदै आएको काठको बाकसमा फेला परिन् २१ दिनकी बालिका